Qayb 2aad Qisadii Guur ee Ardo Cilmi – Rasaasa News
Feb 22, 2010 Ardo, Dhaqanka
Qormadii hore waxay inoo joogtay Ardo oo la meheriyey xoolo badan oo nool iyo moodba lehna laga bixiyey, hawsha dhamaystirkeediina ay u wareegtay dhanka qoyska reer Cilmi. Waxaa kale oo iyana qaybtii koowaad ee sheekada ka dhex muuqatay bayd gaaban oo gabay ah oo Ardo ku noqoday waabay ay kabatay.
Ardo Hooyadeed macaan waxaa dusha ka fuulay xil aan fududay oo ah dhismo aqal oo ay kaamil yeesha. Ardo Hooyadeed awal horeba hawli uma yarayn oo Ardo ubadka ay u weyntahay ee agoonta ah ayey korintooda la daalaa dhacaysay, waxaana u sii korfuushay hawsha dhismihii guri ee gabadheeda.
Dhaqanka suuban ee dhismaha guurka gabdhihii Somalidii miyiga, hooyadu waxay bilaabi jirtay dhig iyo udub goynta dhismaha gabadheeda, kolka gabadheeda dhoorka laga gooyo, ee ay gabadhnimo isu qaanshaarto. Gabadhaha waxaa laga reebi jiray hawlihii ay reerkooda u qaban jireen sida; xoolo raacida iyo xaabo soo gurka, waxaana ay u baydhi jireen dhaaminta iyo aqal samaynta.
Ardo iyo hooyadeed waxay bilaabeen dhismihii guri ee Ardo dhawrka sano ee soo socta ay dagi lahayd. Ardo waxay bilowday in xiliga diraacda ah arah iyo dhurbo guris ay qariyada gabdha qayrkeed u raacdo si ay wax uga diyaariso aqalkii ay gali lahaayeen iyo gogoshii ay ku seexan lahaayeen iyada iyo saygeeda cusub.
Xiliga doogaada ahna subax iyo galaba Ardo waxay gudunta u qaadataa juuqaha galoolka leh ee ku gadaaman reerkooda, si ay uga diirto maydhaxdii ay hooyadeed ka soohi lahay xadhkihii lagu samayn lahaa dhurbadii ay diraacda gurtay oo tuulan aqalkooda, si looga sameeyo hararadii aqalka lagu dhisi lahaa.
Ardo dhibkaa joogtada ah ee ay habeen iyo maalin ku jirto dhismaha aqalkeeda, waxaa uga dhib badnayd farxad la,aanta ay ku beereen afareeydii uu Ina Adeerkeed kolkii ay dhaantada tumanayeen yidhi. Ardo Dhafoorkaa dheeraaday, dhuunigu dhadhan umma leh, sheekadu way dhaaftaa, waxayna had iyo goor ka fikirtaa maxaad yeeshaa, tolow ma diidi kartaa oo hadaad diido maxaa dhici, ma intaad la guri gasho ayaad ka carartaa. Waxaa Qalbigeeda ku soo dhac iyada oo guursatay ninkaas oo ay xoolaha nugulka ah ee uu ninku leeyahay, ileen xoolo uma taqaane ay dhaafeen, dabadeedna iyada oo arrad iyo gaajo la ilxun oo afar caruur ah wadata ay dudadda reerkooda soo magansato aragtana gabdhihii aynigeeda ahaa oo ka mashiikhsanaya.
Ardo waxaa calool xumo ku kicin jiray kolka ay dhalinyarada da,adeeda ahi baydadkii gabyga ahaa ee iyada loo tiriyey ay ku soo celceliyaan iyada oo maqlaysay [dhalinta maanta ee ay sidaasi ku dhacdo sun bay cabi lahaayeen]. Maskiin Ardo, maxay samaynkartaa bulshada ay ku dhex nooshahay naxdinta ma taqaan, wax walba oo qalbigeeda wax u dhimana horteeda ayey ka dhahaan.
Ardo hooyadeed, waxay habeen iyo maalin ku fooyigan tahay samaynta, xadhka ah aqalka laga sameeyo ay ka midka yihiin; garka, dhagaatiga, caynka iyo maraaga. Waxaa kale oo dharaar iyo habeenba ay wadaa tolmaha dhiilasha caanaha ee ay ka midka yihiin; gorofka, bontolka iyo bidheyaasha ay caanaha ku cabidoonaan caruurta ay ayeyda u noqondoonto. Waxaa iyana ay Ardo hooyadeed haweenka reerka ee ay geelooyinka yihiin u gaysataa oo ay la sameeyaan tolmaha iyo diyaarinta qalabkii ubadka dhalandoona sida; dharabtii kaadida ilmaha looga dhigayey iyo dhuugi lagu xambaari lahaa caruurta iyo aleeshii wiilasha kolka ay dhashaan loo xidhi lahaa si isha ay uga xijaabto. Waxaa Intaa dheer samaynta agabkii ay Ardo iyo Saygeedu dharka ku ridan lahaayeen sida Abxadii iyo mimbeerkii ay garabka sudhan lahayd.
Dhismaha Aqalka miyiga oo ka kooban gurgur iyo guud saara, waxaa dhib badan oo aadna u badan gurgurka [guud saar waa dhigaha, udbaha iyo hararada aqalka ee taagan, gurgurna waa agabka aqalka la dhexdhigo ee wax walba leh].
Inta uu aqalka dhismihiisu socdo, wiilka gabadha guursanaya iyo barbaar ilma adeeradiis ah ayaa kolba reerka xoolo hor leh keena iyaga oo hubinaya bal in uu reerku wali diyaar noqday iyo in kale iyo dararinta reerka. Waxaa kale oo xoolaha keenistooda u weheliya aragtida gabadha noqon doonta afadooda iyo dhaqmaadkeeda iyo waliba dhabankeeda.
Kolkasta oo reerka ay xoolo keenaan sayga iyo babaarta la socotaa Ardo way nixi jirtay, waxayna ka nixi jirtay barashadooda sababtoo ah qalbiba uma ayna haynin. Kolka ay reerka yimaadaan geedka loo waabo ee lagu sooryo ayaa galbihii Ardo la odhan jiray si ay u arkaan orodoo shaaha gee. Hooyada hawsheeda weeye in ay gabadheeda qurxiso inta ayna hortagin raga reerka ay u dhaxday, Ardo oo aad u aqli badnayd, waxay diiday in marka ay u tagayso ay is qurxiso iyada oo diidan in uu jacayl u sii galo. Arintaas is qurxin la aanta Ardo oo ay diidmo ka dareemeen duqayda reerku, waxay ku canaanteen Ardo hooyadeed ugana digeen in ayna mar dambe dhicin, kolka ay raga reerka lala xididay soo noqdaan.
Qabta maantana kobtaas ha inoo joogto.